GnuCash yakavhurika sosi yekuverenga software yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
GnuCash yakavhurika sosi yekuverenga software yeLinux
Mavhiki mashoma apfuura iyo GnuCash accounting software yakagadziridzwa kuita vhezheni 3.0. Kune avo vasati vaziva GnuCash ndeyemunhu mari system Yemahara pasi peGNU General Public License (GPL) uye muchinjika-chikuva, ichi chishandiso shandisa kupinda kaviri Ndokunge, GnuCash inonyora zvinyorwa zviviri, imwe yedhibhiti uye imwe yechikwereti, uye huwandu hwechikwereti nechikwereti zvinofanirwa kufanana.
Yakagadzirirwa kuve nyore kushandisa, asi iine simba uye ichichinjika, GnuCash inoda inokutendera iwe kuteedzera maakaundi ebhengi, masheya, mari uye mari. Sezvo ichikurumidza uye inonzwisisika kushandisa serejista cheki, zvinoenderana nemisimboti yeaccount accounting kuti ive nemabhuku akaenzana uye nemishumo chaiyo.
Chirongwa chinoshanda zvese kuchengetedza zvemunhu kana zvemhuri accounting semabhizimusi madiki. Iyo inogadziriswa zviri nyore, inobvumira kuumbwa nekushandurwa kwehurongwa hwekuverenga accounting, uye inosanganisa module yekubhadharisa uye kugadzirisa hukama nevatengi - vane chikwereti uye nevatengesi - vane chikwereti.
1 GnuCash Zvimiro
2 Nezve iyo nyowani vhezheni 3.0 yeGnuCash
3 Maitiro ekuisa GnuCash 3.0 paLinux?
3.1 GnuCash iri paSnap
GnuCash inotsigira mari dzakasiyana siyana, dzakaita sedhora rekuAmerica, euro, paundi, rupiya rweIndia, rupiya rwePakistan, nemari dzakasiyana siyana dzenyika.
Mishumo uye Chati
GnuCash inokutendera kuti utengese data rako mumachati mabhawa, machati machati uye kumwaya nzvimbo. Izvo zvinouyawo nemhando dzakasiyana dzemishumo inogadziriswa, senge purofiti uye kurasikirwa kwemashizha. Iwe unogona zvakare kushandisa GnuCash kune vashandi kupedzisa mishumo yemari.
Dhata inogona kuendeswa kubva kuGnuCash kuenda kune chero imwe software kana zvichidikanwa.
Nebasa iri, iwe unogona kupurinda yakajairwa cheki kana iwe unogona kugadzirisa maitiro zvekuda kwako.
Iwe unogona zvakare kuenzanisa yako bhajeti uchishandisa GnuCash's chebhuku rekutarisa rejista.
GnuCash ine basa iro inokutendera iwe kuteedzera uye kugamuchira stock stock uye mutual mari, kugadzira otomatiki kugadzirisa kune avo mapotifoti zvichienderana nedata rakatorwa kubva kumawebhusaiti.
Nezve iyo nyowani vhezheni 3.0 yeGnuCash
GnuCash 3.0 ikozvino inoshandisa Gtk3 Toolkit uye iyo WebKit2Gtk API Izvi imhaka yekuti kumwe kukuru kweLinux kupihwa kwakamira kutsigira iyo WebKit1 API.
Vapepeti vatsva vakawedzerwa izvo bvumira kuti ugone kubvisa data risingachashandi kana risiri iro kubva kumamepu ekunze, isu zvakare hatigone kukanganwa iyo GnuCash inotangisa mushandisi nyowani yekugadzirisa mafaera inosangana nekutengesa
Vakagadzirisa sarudzo yekubvisa mitengo yekare kubva kudura remutengo, pamwe nekudzima mafaera akadzimwa mune rondedzero yenhoroondo yemafaira menyu.
Kugona kudzima mafaera akadzimwa kubva munhoroondo yezvinyorwa mune faira menyu.
El CSV importer yakanyorwa zvekare muC ++ programming mutauroIzvi zvinowedzera maficha nyowani, kusanganisira kugona kupinza mafaera eCSV anotumirwa kubva kuGnuCash, pamwe chete neakasiyana CSV mutengo mutengesi.
Iyo nyowani yekufarira mapaneru eiyo Alphavantage API kiyi
Chirevo chekuyananisa chinoenderana nemushumo wekutengesa, gwaro rezvemari, uye mushumo weBarchart wekuyerera kwemari.
Maitiro ekuisa GnuCash 3.0 paLinux?
Iyi accounting system inowanikwa mune angangoita ese maLinux kugoverwa, kuti iwe ugone kuiisa neumwe wemirairo inotevera, zvichienderana nekugovera kwako:
Para gadza GnuCash muDebian, Ubuntu uye zvigadzirwa isu tinoita unotevera kuraira:
Para Fedora, CentOS uye zvigadzirwa zvatinomhanya:
Kana iwe uine kuvhuraSUSE iwe unofanirwa kumhanya uyu murairo:
zypper install gnucash
Para Arch Linux uye zvigadzirwa zvatinomhanya:
sudo pacman -S gnucash
GnuCash iri paSnap
Kana iwe uchida kuisa maapplication kuburikidza neSnap mapakeji, GnuCash ine yayo snap package, chete chete chinokanganisa ndechekuti panguva ino haisati yagadziriswa kune yayo nyowani vhezheni mukati meSpap Store.
Asi iwe unogona kuve wakarinda nekukurumidza kana zvangovandudzwa.
Kuti uiise kuburikidza snap iwe unongomhanya:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » GnuCash yakavhurika sosi yekuverenga software yeLinux
Tsitsi, zvinondipa kukanganisa kwekutendeseka, handina mari yakaiswa mune zvangu zvemari :(
Juan Pedro akadaro
Ini ndinogona kukurudzira software yekuverenga iyo ine zvese zvakagadzirira zvemagetsi invoicing. Isu tine mukana wekuziva kubva kune nhare yekushandisa uye kubva kune chero komputa ine internet.
Pindura Juan Pedro
Zvekuverenga hazvisi zvekugadzirira, uye kana nyanzvi, ndinokurudzira Keme. Multiplatform, yemahara, uye neyakagadziriswa nguva nenguva. Pasina chinhu chekuchiva kumapurogiramu ekubhadhara akabhadharwa. http://keme.sourceforge.net/
Chrome OS inoburitsa chikamu chayo cheGnu / Linux ine yekuvandudza